Jariiradda The Telegraph oo shaacisay haddii uu Ander Herrera doonayo inuu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
(Manchester) 23 Maarso 2019. Jariiradda The Telegraph ayaa shaaca ka qaaday haddii uu ciyaaryahanka kooxda Man United ee Ander Herrera doonayo inuu ku biiro naadiga Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska oo muddooyinkii dhowaa la la xiriirinayey.
Ander Herrera ayaa la soo sheegayaa inuu rajaynayo inuu heshiis cusub u kordhiyo kooxdiisa Manchester United, inkastoo loo oglaaday inuu beeca xorta ah ugu biiri karo naadiga Paris Saint-Germain.
29-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa waxa uu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxaana sidaas darteed uu xaq u leeyahay inuu wadahadallo la yeesho kooxaha ajaaniibta ah.
Qandaraaskiisa oo dhacaya awgiis Herrera ayaa la la xiriirinayaa kooxo badan oo ka dhisan Yurub, waxaana doonaya naadiga PSG oo rabta inay dalab ka gudbiso dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Sida ay warinayso Jariiradda The Telegraph xiddigan khadka dhexe ee reer Spain ayaa ku rajo wayn inuu heshiis uu ku joogayo la galo kooxdiisa Man United ka hor inta aan la gaarin suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga.
Kooxda Red Devils ayaa lagu soo waramayaa inay diiday inay ogolaado dalabaadka mushaharka ee Herrera, laakiin waxa uu kooxda u ahaa ciyaaryahan muhiim ah ee ka hoos shaqeeya macallin Ole Gunnar Solskjaer, waxaana Man Utd ay ku qasban tahay inay lacago badan kharash-gareeyaan si ay u keenaan bedelka noociisa oo kale ah.
Olivier Giroud oo xalay noqday xiddiga saddexaad ee ugu goolasha badan taariikhda xulka qaranka France